सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानूनको निर्माणमा सरकार लागेको सूचना प्रविधिमन्त्रीको भनाई - Samachar PatiSamachar Pati
समाचारपाटी, पोखरा, १३ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोेकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानूनको निर्माणमा सरकार लागेको बताएका छन् ।
क्षेत्र नं ३ कास्की बामगठबन्धनको घर दैलो कार्यक्रम
अब बेलुनमा उडेर पोखरा घुम्न पाइने, कती खर्च लाग्छ ! आकाशबाट के-के देख्न सकिन्छ ! (हेर्नुहोस यो भिडियो)
जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति